कतार सरकारले नेपाल सरकारलाई ३ वटा मर्सिडिज कार उपहार दिने। - Malayakhabar
होम पेज कतार विशेष कतार सरकारले नेपाल सरकारलाई ३ वटा मर्सिडिज कार उपहार दिने।
कतार सरकारले नेपाल सरकारलाई ३ वटा मर्सिडिज कार उपहार दिने।
काठमाडौं := कतार सरकारले नेपाल सरकारलाई ३ वटा मर्सिडिज बेन्ज कार उपहारमा दिने भएको छ । कतार सरकारले दिने ३ वटा उच्च सुविधायुक्त मर्सिडिज बेन्ज इ –१८० सिरिजका ३ वटा कार स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यी कार सरकारी प्रयोजनको लागि स्वीकार गरिएको हो । कतारले यसअघि पनि ६ वटा मर्सिडिज कार नेपाललाई उपहार दिएको थियो। हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ति कारहरु सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकार का प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
विश्वकै आरामदायी र महंगोमध्येको एक चर्चित मानिन्छ मर्सिडिज कार । यस्तै बैठकले नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको पस्तावमा नवौं प्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
अघिल्लो लेख श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्रै टिकट लिनुः वैदेशिक रोजगार विभाग।
पछिल्लो लेख जसले बुलेट बाइक किन्न लगाए, तर चढ्न पाएनन्।
लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुराबारे दिल्लीमा केही बोलेनन् परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली।
तत्काल नयाँ श्रमिकको लागी मलेसिया रोजगारी खुल्ने सम्भावना एकदमै कम: नेपाली दूतावास।
सशस्त्र प्रहरी पानी मुनी गएर खोज्न सक्ने जनशक्तिः डिआइजी प्रधान।
काठमाण्डौं := नेपालले सीमाका मुद्धा पनि उठाउने भन्दै तीन दिनका लागि दिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा...
क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले नयाँ श्रमिकको लागी मलेसियाको रोजगारी निकट भविष्यमै खुल्न सक्ने सम्भावना एकदमै...
कपिलवस्तु:= सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) किशोर प्रधानले सशस्त्र प्रहरीमा पानी मुनी गएर भए पनि खोज्न सक्ने...
सुवर्ण गाउँपालिका कवही गोठमा जिल्ला समन्वय बैठक सम्पन्न।
बारा:= हिजो शुक्रबार सुवर्ण गाउँ पालिकामा जिल्ला समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। सुवर्ण गाउँ पालिका को अध्यक्ष...
राम राजा (मो.वि. शाह) बहुमुखी क्याम्पसको १३ औँ क्याम्पस सभा सम्पन्न।
बारा:= राम राजा (मो.वि. शाह) बहुमुखी क्याम्पसको १३ औँ क्याम्पस सभा शुक्रबारको दिन सम्पन्न भएको छ। राम...